6 Ereyga muhiimka ah ee qaldan | Martech Zone
Wednesday, April 18, 2012 Isniin, February 8, 2016 Douglas Karr
Markaan sii wadno inaan ku dhex daadino cilmi baarista qoto dheer iyo qoto dheer macaamiisha nooca ereyada muhiimka ah ee soo jiidanaya taraafikada raadinta, waxaan ogaanay in shirkado badan ay leeyihiin fikrad qaldan markay tahay baaritaanka erayga muhiimka ah iyo adeegsiga.
Hal bog ayaa si fiican ugu kala sarreyn kara daraasiin ereyada muhiimka ah. Dadku waxay u maleynayaan inay u baahan yihiin hal bog hal erey oo kasta oo ay doonayaan inay bartilmaameedsadaan simply Sikastaba kiiska ma ahan. Haddii aad leedahay bog si fiican ugu habboon ereyga muhiimka ah, ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ayaa sidoo kale qiimeyn kara sidoo kale! Maxaad u sii wadaysaa inaad ku darto tan oo bogag ah oo leh nuxur soo noqnoqda marka aad kaliya hagaajin karto hal bog oo aad u kala sarreyn karto koox ereyo ah?
Erayada muhiimka ah ee mugga badan iyadoo darajooyin aad u sareeya ay u horseedi karaan booqashooyin badan laakiin taasi waxay wax u dhimi kartaa sicirkaaga beddelka. Kelmadaha muhiimka ah ee sumadaha leh iyo iskudhafyada juqraafiyeed ayaa kuu keeni kara macaamiisha ugu badan… xitaa haddii ganacsigaagu uusan daruuri ahayn deegaanka.
Kala sarreynta dabada dheer (mugga raadinta hooseeya, ku habboonaanta sare) ereyada muhiimka ah micnaheedu maahan adiga darajo ma sameyn karo oo ku saabsan ereyada aadka u tartamaya, keywords keywords. Xaqiiqdii, waxaan ogaanay in macaamiisheennu ay kuxiran yihiin tiro aad u tiro badan oo ah keywords keywords, waxay u muuqdaan inay ku sii kala sarreeyaan waqti ka dib marka la eego shuruudaha tartanka. Taasina dhab ahaan run ma aha. Sababtoo ah inaad darajo ku leedahay erey aad u tartamaya, macnaheedu maahan inaad ku sarreeyso dhammaan shuruudaha dabo dheer ee la xiriira. Erayada dabada dheer waxay u baahan yihiin in lagu taageero waxyaabaha ku habboon.
Baabuurta badan macnaheedu maahan had iyo jeer beddelaad dheeri ah. Marar badan, macnaheedu waa sicir bararka sare iyo booqdayaasha jahwareerka badan maxaa yeelay ma heli karaan waxay raadinayeen.
Adeegsiga ereyada muhiimka ah sharraxaadda meta saamayn kuma yeelan karto darajadaada, laakiin waxay hagaajin doontaa heerkaaga guji ee bogga natiijooyinka mashiinka raadinta (SERP). Xusuusnow in ereyada muhiimka ah ee la raadiyay ay wali ku sii dhiirran yihiin SERP, iyagoo u fiirsanaya soo gelitaankaada oo aan ahayn kuwa kale.
Dad badan xitaa ma adeegsadaan ereyada raadinta gaagaaban, halkii ay ka dooran lahaayeen inay su'aalaha oo dhan ku qoraan mashiinnada raadinta. Haysashada Su'aalahasu'aal badanaa la isweydiiyo) istiraatiijiyaddu waxay noqon kartaa istiraatiijiyad isticmaal keyword cajiib ah.
Wax kale ma heshay?
Waa kuwan qodobbo la xiriira oo laga yaabo inay daneynayaan:
Sida looga faa'iidaysto keywords wax ku ool ah
Sidee loo hagaajiyaa Goobaha Bogagga
Sida loo wanaajiyo bog loogu talagalay Raadinta Maxalliga ah
Sida loo tayayn karo a Youtube Video
Sidee loo hagaajiyaa Title Tags
Sida loo tayayn karo a Post blog
Tags: keywordcilmi-baarista muhiimka ahisticmaalka erayga muhiimka ahkeywords
Qorshaynta, Naqshadaynta, iyo Hagaajinta Websaydh
Apr 19, 2012 at 12: 30 PM
thnx ee macluumaadkan, oo waxaan sugeynaa goor dhow
Apr 20, 2012 at 9: 48 AM
Gaadiidku wuu fiican yahay, laakiin beddelaaduhu way ka fiican yihiin. Waa muhiim inaad ku darto dabo dhaadheer isku darka. Dadka ku raadiya ereyada keywords dabada dheer waxay raadinayaan wax gaar ah. Waxay u badan tahay inay ka gudbeen hab cilmi baaris ah oo ay jirto fursad ka fiican oo lagu beddelo.